१५ वर्षदेखि विद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि अष्ट्रेलिया पठाउँदै आएको इ प्लानेट (एजुकेशन प्लानेट) एजुकेशन कन्सल्टेन्सीेले प्रत्येक वर्ष दुई पटक बृहत एजुकेशन फेयर आयोजना गर्दै आएको छ । यसै क्रममा यही शनिबार इ प्लानेटको कार्यालय बागबजार, काठमाडौंमा र आइतबार चितवनको भरतपुर गार्डेन रिसोर्टमा एजुकेशन फेयर आयोजना हुँदैछ । एजुकेशन फेयर आयोजना गर्नुको उदेश्य के हो ? किन गरिन्छ एजुकेशन फेयर आयोजना ? प्रस्तुत छ, यसै विषयमा इ प्लानेटका सिईओ नयन लामिछानेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आजभोली अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थी लक्षित थुप्रै एजुकेशन फेयरहरु भइरहेका छन् । किन गरिन्छ एजुकेसन फेयर ?
विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थीले सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कलेजबारे जुन सुचना प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहीँ एजेन्टमार्फत मात्रै पाइरहेको हुनाले विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि स्वयम् नै आएर जानकारी प्रदान गर्ने र विद्यार्थी र अभिभावकले प्रतिनिधिहरुसँग भेटेर कुरा गर्न पाउँछन् । त्यसरी सबैले जानकारी पाउने गरी एजुकेसन फेयर गरिँदा बढि प्रभावकारी र अर्थपूर्ण हुन्छ ।
अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयरको आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ?
अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीले नेपालमै बसेर आफुले रोजेको विषय र चाहेको विश्वविद्यालयबारे आवश्यक पर्याप्त जानकारी प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले यो एजुकेशन फेयर आयोजना गरिएको हो ।
विद्यार्थीलाई अष्ट्रलियाको शिक्षाका लागि परामर्श दिन इ प्लानेट त सधैँ खुल्ला नै छ । फेरि यो एजुकेशन फेयर किन ?
पहिलो कुरा त विद्यार्थीले सम्बन्धित प्रतिनिधिबाटै सही सुचना प्राप्त गर्न सक्छन् । साथै फेयर लक्षित गरेर विभिन्न विश्वविद्यालयहरुले छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेका हुन्छन् भने आवेदन र भीषा प्रक्रिया पनि अलिक छिटो हुन्छ । अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि जान आफु योग्य छु कि छैन भन्ने कुरामा समेत विद्यार्थी प्रष्ट हुन्छन् ।
अष्ट्रेलिया बहुसंस्कृति भएको मुलुक हो । त्यहाँ सबै कला र संस्कृतिलाई उत्तिकै सम्मान र महत्व दिइन्छ । एजुकेशन हबकै रुपमा रहेकाले थुप्रै मुलुकका विद्यार्थीहरु त्यहाँ जान्छन् । अष्ट्रेलियामा आफ्नै संस्कृतिमा बाच्न पाइन्छ । नेपाली विद्यार्थीहरुले पनि अष्ट्रेलिया जानु अघि त्यहाँको शैक्षिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक वातावरणबारे जानकारी प्राप्त गर्नु जरुरी छ र त्यो कार्य पनि फेयरमा गरिन्छ ।
अष्ट्रेलियाका प्रख्यात विश्वविद्यालयहरु युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी सिड्नी, युनिभर्सिटी अफ ओलोङ्गोङ, वेष्ट्रन सिड्नी युनिभर्सिटीलगायत २० भन्दा धेरै युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरु एजुकेशन फेयरमा सहभागी हुनेछन् । ति प्रतिनिधिहरुबाट नेपाली विद्यार्थीले उचित जानकारी हासिल गर्न सक्नेछन् ।
अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरु कुन विषयमा अध्ययन गर्न जान्छन् ? यो फेयरमा कुन कुन विषयको बारेमा जानकारी पाइन्छ ?
प्रायः नेपाली विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलियामा अकाउन्टिङ, आइटी, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, विजनेश स्टडिज, हेल्थ लगायतका विषयमा अध्ययनका लागि जाने गर्छन । यो फेयरमा मिश्रित विश्वविद्यालयहरुको सहभागिता रहने हुँदा यीबाहेक विद्यार्थीले चाहे अनुसारको जुनसुकै विषयमा जानकारी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले यो एजुकेशन फेयरमा सहभागिता जनाउनका लागि के गर्नुपर्छ ? यसका प्रक्रियाहरु के छन् ?
यसको लागि विद्यार्थी र अभिभावकहरुले अनलाईनमार्फत रजिस्ट्रेशन पनि गर्न सक्नेछन् । यसका अलावा इ प्लानेटको अफिसमै आएर पनि रजिस्ट्रेशन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रजिस्ट्रेशनपश्चात उनीहरुको विषय अनुसारका ३ देखि ४ वटासम्म युनिभर्सिटी छनोट गरिनेछ र सम्बन्धित युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने हुँदा आवश्यक सम्पूर्ण सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन ।
गुणस्तरीय, भरपर्दो तबरले अष्ट्रेलिया गएर अध्ययन गर्न पाउँछु भनेर विद्यार्थीलाई ढुक्क बनाउन सक्छ त यो फेयरले ?
अवश्य पनि । एजुकेशन फेयरमार्फत नेपालमै रहेर सम्बन्धित प्रतिनिधिहरुबाट आफुले इच्छाएको विश्वविद्यालय र चाहेको विषयबारे सम्बन्धित विश्वविद्यालयमै पुगेर पाएको जस्तै गरी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्ने हुँदा अवलोकनकर्ताहरु शतप्रतिशत ढुक्क हुन सक्नेछन् ।
कस्ता अवलोकनकर्ताहरुको आउलान् त ? कति संख्यामा यो फेयरमा सहभागि हुन्छन भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
हामीले विशेषगरी अष्ट्रेलियामै अध्ययन गर्ने उद्देश्य बोकेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर यो फेयर आयोजना गरेका छौँ । जो साँच्चै अध्ययनका लागि जानैपर्ने छ वा जाने मनस्थिती बनाएका छन् र जसका लागि विदेश अध्ययन नितान्त आवश्यक छ, उनीहरु हाम्रा अवलोकनकर्ता हुन् । करिब ५ सयदेखि ७ सय अवलोकनकर्ताहरुको सहभागिता रहने आँकलन गरेका छौँ । र हाम्रो तयारी पनि सोही अनुसारको छ ।
यही आउँदो नोभेम्बर ९ तारिखमा काठमाडौँ बागबजारमा रहेको इ प्लानेटको अफिसमै सो एजुकेशन फेयर हुँदैछ । साथै त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् नोभेम्बर १० तारिखमा चितवनको भरतपुरस्थित भरतपुर गार्डेन रिसोर्टमा सो फेयर हुनेछ । बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म फेयरमा सहभागिता जनाउन सकिनेछ ।
नेपालका अरु शहरहरुमा वा स्थानहरुमा पनि एजुकेशन फेयर गर्ने योजना बनाउनुभएको छ की ?
अहिले तत्कालका लागि त त्यस्तो योजना बनिसकेको छैन । तर अर्को वर्षदेखि चाहीँ पोखरा बुटवल लगायतका शहरहरुमा पनि यस्ता एजुकेशन फेयर आयोजना गर्ने योजनामा हामी छौँ ।